Yiziphi izinhlobo ezahlukene fillers? Plasters imisebenzi ingaphakathi. Finishing, abaluphahleka zokuhlobisa
Kokuvala namuhla yokwakha isebenziseka ngezindlela eziningi, lapho ufuna ukususa ukukhubazeka, bushelelezi kwamanzi maholoholo ngempumelelo, ngisho ngcono ukubukeka ifenisha. Nokho, ngo-mBhalo sikhuluma ngohlobo zokuhlobisa. Ukuvakashela ezimakethe for izimpahla, ungathola ibanga elikhulu Izingxube esetshenziswa ukusebenzisa ku ngamunye wabo injongo yawo.
Ngokuvamile, olukhonkiwe esetshenziselwa yokululama izindonga ophahleni. Ngemuva omiswe, base ungqimba kungenziwa zaveza noma udonga-papered lodonga akhona. izindonga Kaningi lemva ahlotshiswe tile Ceramic. Kuye Ukwakheka, lo putty kungenziwa oluthathwa zibe izinhlobo eziningana, lokhu kuzoxoxwa ngezansi.
Kufanele ukuhlukanisa phakathi kakhudlwana futhi ingxube njengoba kuhlosiwe, zingabantu:
Yokuqala putty sisetshenziswa ungqimba obukhulu noma izingqimba eziningana, okuvumela izindonga ukuze akhulule zamehlo umxhwele. Uma ukuqala putty ungqimba uDries ungakwazi uqhubekele isicelo topcoat. Universal izinhlobo fillers senzelwe ebusweni ukuqeda isiqalo noma ukuqeda ungqimba. yamathebhu Ohlukene kungaba kakhudlwana futhi ukungaguquguquki, bakulungele noma ezomile. Uhlobo wesibili ezivamile, ngoba izingoma onjalo sibe izindleko eyamukelekayo futhi kulula ukuyisebenzisa. Thenga yamathebhu ezomile kungaba iphakethe, ivolumu zazo luyehluka in the ububanzi 3 kuya 25 kg.
Incazelo fillers ezomile
Uma ucabangela izinhlobo fillers, ukunakekelwa okukhethekile kufanele ukhokhe ukuze ome ukwakhiwa, ngoba kunezimo eziningi, kuhlanganise:
kungenzeka ekushintsheni kwabantu ingxube;
wendlala ukulungiselela isixazululo;
isitoreji lula futhi zokuthutha;
isitoreji kwesikhathi eside yamathebhu ezomile.
Guqula isixazululo kwabantu kungase kube indlela ngokungeza ivolumu elithile lamanzi. Ukulungiselela * kwetfula elula - emanzini yokuhlanganisa kuyoba okwanele ukuze ungeze ukwakheka ezomile uhlanganise. Ukuze isitoreji ingxube dry kubalulekile ukuhlinzeka ezingeni eliphansi nomswakama, kodwa ngokuphathelene lokushisa, kungaba noma yimuphi.
Nokho, izinhlobo owomileyo ube yiziphethu fillers inezici ezithile ezingathandeki, bungokulandelayo:
isidingo ulandela imiyalelo;
Dilution ingxube kufanele sigcwaliswe izingxenyana ezincane;
isidingo sikhathi esengeziwe sokulungiselela yesixazululo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi isakhiwo uyoba zifezeke pretty masinyane, sizoqala ngemuva kwesikhathi esithile lukhuni. Uma ungeyena ukulungele ukuba banamathele izincomo esiqinile, kubalulekile ukuba ukuthenga usimende ngomumo eyenziwe, okuyinto luyasetshenziswa ngamabhakede. Ingasetshenziselwa ngokushesha emva kokuthenga. Izingxube ezinjalo ephelele Wabasaqalayo amakhosi, ngoba phakathi izithako kukhona izinto ukuqeda solidification okusheshayo yesixazululo. Kodwa kuyodingeka ukuthi bakhokhe kancane ngoba.
Izinhlobonhlobo fillers, kuye ngokuthi ukwakheka: latex putty
Uma ucabangela izinhlobo fillers, kufanele sinake Ukwakheka kwabo. Isixazululo latex ngokuvamile njengeposikhadi ngomumo ukuxubana, ngoba ivumela latex ukuba izinto ewuketshezi, abenze pliable ngaphezulu. Lezi fillers asebenziseka kalula futhi ingagcinwa u-Adalberto isikhathi eside.
Uma uphakamisa umbuzo iziphi izinhlobo fillers kukhona, kufanele bajwayelane ukwakheka usimende, phakathi izithako aqukethe usimende, wenza isibopho. Phakathi kwezinye izinto, uketshezi kanye yamathebhu esetshenziswayo ukukhiqizwa. I yamathebhu kungaba encane ingxenyenamba emfuleni isihlabathi, amatshe kanye nezinye amanyela. Uma esihlabathini izihluthulelo ingaphezu 5%, akusiyo efanelekayo ukulungiswa yamathebhu.
Dilution sokuqanjwa kufanele kube ngamanzi acwebileyo ithatha, ogama lokushisa ingeqi 20 ° C. Lapho ukuxuba, sebenzisa Ingxenye:
4 izingxenye isihlabathi;
1 okuyingxenye usimende;
Usimende usimende olumelana umswakama, ngakho ingasetshenziswa ekhishini noma egumbini lokugezela.
Phakathi iphuzu ezibuthakathaka Eqinisweni, okuyinto ukuthi ngemva iphele ingxube ihlala, kanti isixazululo libhekene kuyaqina, ngakho-ke ngeke kube nzima ukusebenza izindonga kakhonkolo. Ngo ukhonkolo ebusweni usimende putty kungcono azenziwanga, ngoba ekugcineni kungenziwa embozwe ukuqhekeka ungqimba.
Kaningi amakhosi yasekhaya uzibuze mayelana nokuthi yiziphi izinhlobo yamathebhu khona. amaphuzu engeziwe kufanele zabelwe zinhlobo abaluphalileyo ingashintshwa ukuze sezulu egumbini futhi ivumela umoya ujikeleze. Uma ufuna indawo ngokuphelele flat, kufanele usebenzise ingxube usimende, emva omiswe, okungase ngesineke, ukunamathisela lodonga noma ukwenza imidwebo yobuciko.
Ukwakheka bome angabacwasi ngokushesha futhi akusho bungakhiphi iphunga. Gypsum usimende hypoallergenic, kuba engabizi futhi ukumelana umlilo. Kodwa ukusetshenziswa ingxube enjalo bengayi yonke indawo enamathela ihlala isikhathi eside, izimo yokusebenza kuzohluka senhliziyo njalo e umswakama lokushisa. Gypsum kalula emibi noma ukuzehlukanisa, ngakho-ke akukho Kunconywa ukusingatha ngosizo a amakamelo putty umdlalo noma amakamelo zezingane.
I polymer elingenamikhono
Uma ucabangela izinhlobo yamathebhu lokwakha izindonga, kufanele sinake uhlobo i-polymer iqina.
Phakathi izithako ingxube iqukethe izinto ezinika Ukuzivumelanisa nezimo eliphezulu, ngakho izindleko impahla kuphezulu. Ukusebenzisa yamathebhu polymer, wena uyobe uhlinzeke enamathela ukuqina kanye uzokwazi ukuthola umphumela ephelele. Lapho ekhetha izimonyo, banake izitifiketi yomenzi, ngoba kukhethwa ezihlukahlukene putty kunobungozi ukuthenga mbumbulu.
Le isixazululo ingasetshenziswa umhlobiso Ingaphakathi nengaphandle, it has okusezingeni eliphezulu sezulu ukumelana naso futhi kwenze kakhulu e ukuthintana nanoma imuphi evele. Uma udinga ukwakheka aliqede, kubalulekile ukuba ukuthenga putty acrylic, okuvumela ukuba kuzuzwe olubushelelezi ephelele futhi flatness. Isicelo Its kwenziwe nge ungqimba elincanyana kabani ukujiya ingeqi 1 mm. Njengoba isizathu kungaba isinyathelo izinkuni okuqinile. Le isixazululo libhekene yokuthi awusebenzi sidilike nge sikhathi, ayinakho iphunga ukungcola anobuthi.
Ukwahlukanisa kokuqeda putty
Uma ucabangela izinhlobo sekugcineni putty, ungakwazi ukuqonda ukuthi le nto ihlukaniswa ngokweminyaka isimiso eye kuchaziwe ngenhla. Kuye injongo, olukhonkiwe sekugcineni zingahlukaniswa zibe ingxube izicelo yangaphandle noma angaphakathi. Olungaphambili lwesonto fillers ezisetshenziswa kuzo esigabeni sokugcina, ngokuvamile banesikhathi isisekelo usimende, nalo ungakwazi ukuthwebula nokuqinisela, amandla nokuqina kwayo.
Ukuze amakamelo evame ukusetshenziswa usimende putties, okuyinto abe plasticity okusezingeni eliphezulu futhi adhesion kuphila ngemva iphele anika izindonga zaba mhlophe sanded kalula. Zithandwa eminyakeni yamuva polymeric zinhlobo putties imisebenzi yangaphakathi, ezisetshenziswa topcoat. Nabo, ungakha ebusweni ekahle. izingoma ezinjalo ube ethile ye liphinyiselwe eziphezulu.
ngezigaba Jikelele putty zokuhlobisa
Uma ucabangela izinhlobo fillers zokuhlobisa, kufanele sinake izinhlobo isixazululo ezengeziwe. Ngokwesibonelo, uwoyela-in-ingcina ingxube isetshenziselwa ukuvumelanisa izinhlobo ezilandelayo ezishelelayo:
Ngemva kwalokho, amafutha we-ingcina yamathebhu kungenziwa camera ukuhlakazwa aqueous nopende uwoyela ezisekelwe futhi enamels. Amanzi-ukuhlakazwa yamathebhu - isixazululo esinqunyiwe for yokululama nokususa amaphutha evundile ukhonkolo, ngezitini, ukhuni noma usimende wokwakha izindonga. Surface ngaphambi isicelo sokuqanjwa kungenzeka ezinemibala. Ngezinye izikhathi yamathebhu amanzi bahlakazeka lisetshenzisiwe fibreboard.
Ngaphambi ekuzuzeni putty kuyadingeka ukuchaza enamathela ezosetshenzwa ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. It kuncike lolu hlobo ingxube. Ukuze amakamelo nge ezisezingeni eliphansi kakhulu noma ngokulinganisela umswakama kuyinto isixazululo usimende ephelele. Lokhu kumele kufake egumbini lokuphumula futhi ephasijini. Ekhishini yokugezela iyabonakala sekugcineni best of acrylic noma usimende yamathebhu, ngoba lezi zakhi asesabi ukuchayeka amanzi.
Abaluphahleka izindonga ku amabhikhoni ngezandla
Indlela unamathelise kumatilasi emoyeni: ukulungisa ngokwakho!
Ukudweba jewel: izinga layo kanye ububanzi
Chalet imibono: ezomile emfudlaneni futhi Gazebo bukhoma
Indlela yokwenza plasterboard Uphahla lwangaphakathi: Izincomo
Kanjani ukwakha futhi ifake USiphon ngoba echibini ekhishini?
I-marabou - a kakhulu futhi ngokungafani nanoma iyiphi enye inyoni
Uhlelo yenkampani amasu
Lapho bephethe ukumenyezelwa ukudayiswa indawo?
Ama-fractures omhlathi: ukwelashwa. Ukuhlukaniswa kwemifantu ehlathini. Yini engozini ukuphulwa okukwenziwe nge-offset
Felice Fawn: izithombe ngaphambi nangemva kwesisindo. Umlando Felice Fawn
Hill Viatka Uval. Sibhedlela "Vyatskiye Uvaly": amanani kanye nokubuyekezwa of ukwelashwa
Zokuqhuba iziza for ukwakhiwa
Coffee "salmon ikhofi" (Vladimir): izithombe kanye nokubuyekeza
Bobani abathanda ukwahlukana, futhi benzani?
Indlela tie izintambo zezicathulo ku amateki ngaphandle umnsalo amahle imfashini: amasu kanye nezincomo
Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke futhi umehluko ezweni iqashwe